Wararka Maanta: Axad, Dec 9 , 2012-Boqollaal Qof oo lagu Qab-qabtay Howlgallo ay Ciidamada Booliska Kenya ka Sameeyeen Xaafadda Islii - Nairobi
Goobaha ay ciidamadu howlgallada ka sameeyeen ayaa ah nawaaxiga masaajidkii uu qaraxa ka dhacay iyo waaxda sec3 ee xaafadda Islii, waxayna ciidamadu guri-guri u galayeen dhismayaasha ku yaal goobahaasi.
Ciidamada ayaa dadka ay qabteen waxa u badnaa Soomaali aan heysan sharci ay dalka ku joogaan, waxaana dhamaan dadkii la qabtay loo taxaabay xabsiga, iyadoona sidoo kale ciidamadu ay dabagal ku hayaan gaadiid looga shakisanyahay in uu watay ruuxii bamka tuuray.
Taliyaha ciidamada booliska Nairobi Moses Ombati oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka lagu soo qabtay howlgallada ay u badanyihiin dad aan heysan dukumintiga aqoonsiga ee dalka lagu joogo, wuxuuna sheegay in ay ku raadjoogaan gaadiid la aaminsanyahay in ay isticmaalayeen dadkii qaraxa ka danbeeyay.
“Dhamaan dadka la xiray waa dad ajaanib ah oo aan heysan dukumintiyo sax ah oo muujinaya in ay dalka sharci ku joogaan. Dhamaantood waa la su’aali doonaa,” ayuu masuulkani hadalkiisii raaciyay.
Kooxda dambi baarista dalka Kenya ayaa dabagal ku haysa gaadiid dadkii goobta ku sugnaa goobta uu qaraxa ka dhacay ay sheegeen in uu watay ruuxa bamka soo tuuray, waxayna boolisku sheegeen in ay gacanta kusoo dhigi doonaan gaadiidkaasi.
“Hadda ma oran karno waxaan heynaa dadkii falkan ka danbeeyay, laakiin waxaan ku raadjoognaa cadeymo aan helnay,” ayuu Mr. Ombati hadalkiisii raaciyay isagoona sheegay in ay hayaan lambarka diiwaanka gaariga ay isticmaaleen kooxaha qaraxa fuliyay.
Jawiga guud ee xaafadda islii ayaa ah mid dagan, waxaana wadooyinka dhexmara xaafadda lagu arkayaa ciidamo katirsan kuwa booliska Kenya oo sugaya ammaanka.
Howlgallada ay ciidamada booliska Kenya ka sameeyeen xaafadda Islii ayaa ka danbeeyay kadib markii habeenimadii Jimcihi aynu soo dhaafnay qarax lala eegtay Xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji Xildhibaan Yuusuf Xasan, xilli uu dadweeyne kasoo baxay salaadda cishaha kula hadlayay afaafka hore ee Masaajidka Al-hidaaya ee magaalada Nairobi, qaraxaasoo inta la ogyahay sababay dhimashada shan qof iyo dhaawaca in ka badan 30 qof oo uu ku jiro xildhibaanka.